रात्रीबस र ट्रक एक आपसमा जुध्दा ३ जनाको ज्यान गएको छ भने १० जना घाइते – Khabar Patrika Np
रात्रीबस र ट्रक एक आपसमा जुध्दा ३ जनाको ज्यान गएको छ भने १० जना घाइते
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २९, २०७७ समय: १९:०३:५६
मकवानपुरको मनहरी–६, सुनाचुरीमा रात्रीबस र ट्रक एक आपसमा जुध्दा ३ जनाको ज्यान गएको छ भने १० जना घाइते भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत् हेटौंडा–चितवन सडक खण्डमा बिहान ३ बजेतिर बस र ट्रक एकआपसमा ठोक्किएको थियो ।
हेटौंडाबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको ना. ४ ख ५१४९ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट हेटौंडा आउँदै गरेको ना. ६ ख ८९ नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाइ दुर्घटनाग्रस्त हुँदा बसका चालकसहित ३ जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
ज्यान गुमाउने बस चालक वीरगञ्ज–१५ का ३५ वर्षीय मदनकुमार थापा, बसमा सवार भारत सिस्वाका अन्दाजी ४० वर्षीय अभयलाल कुशवाह र भारत बिहारका ४० वर्षीय सुनिल कुमार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बस चालक थापा र कुमारको उपचारको क्रममा चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेज र कुशवाहको हेटौंडा अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो । दु/र्घटनामा बस र ट्रकका गरी १० जना घा/इते भएको र उनीहरुको हेटौंडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीले जनाएको छ ।